Naa, ị nwere ike họrọ gị onwe gị Hazie foto iPhone ikpe na enyemaka nke internet. Ma ị bụ n'ụlọ ma ọ bụ na-arụ ọrụ, ị dị nnọọ mkpa itinye adreesị si n'okpuru ihe nchọgharị gị na na mgbe ahụ họrọ a n'ebe ebe ị chọrọ iji nweta gị Hazie foto iPhone ikpe. N'okpuru ebe a, m na-ekere òkè a ndepụta nke TOP 10 ebe hazie foto iPhone ikpe, ntụziaka nke otú hazie iPhone ikpe na gị onwe gị foto, gị eyen si foto, na gị ihunanya photos.
1.ZAZZEL: Zazzel bụ nnọọ mfe iji na ya ụlọ ọrụ-eme ka ọ nọmba 1 na nke a ndepụta. Ị dị nnọọ mkpa na-eso ndị a dị mfe nzọụkwụ n'okpuru ka omenala foto iPhone ikpe.
Step1: Tinye website adreesị nke Zazzel na nchọgharị gị. Ebe a bụ adreesị: http://www.zazzle.com/custom/cases?ps=120
Step2: Họrọ iPhone si ngalaba nke ikpe, na n'aka ekpe nke mmanya. Mgbe a na peeji nke na-egosi, họrọ zuru okè udi n'ihi na gị iPhone na pịa ya. Ọzọ na peeji ga-idem na gị ide iPhone ikpe.
Step3: Nke a na peeji ga-egosi gị họrọ ide iPhone ikpe na otu nhọrọ nke họrọ ihe oyiyi si gị album. Lelee na-acha ọcha igbe na "Bido nhọrọ". Pịa otu nhọrọ nke "Tinye image".
Step4: Na a na ogbo họọrọ ihe oyiyi si gị album na pịa the- OK bọtịnụ bulite gị ihe oyiyi. Dị ka nke a-
Step5: Ugbu a, ị ga-enwe ike iji hazie foto gị na na iPhone ikpe. Ị ga-ahụ ihe niile nke foto customization nhọrọ n'akụkụ aka nri nke na peeji nke.
Step6: Nke a ga-anya nke gị ahaziri iPhone ikpe na gị onwe gị na foto. Na mgbe ahụ, ị ga-akwụ ụgwọ maka ikpe na-eche maka ya.
2.CASE - ÒTÙ ỌLỤLỤ: My abụọ n'elu oke bụ Ileba - nwunye. Nke a bụ fun iji Ileba - Nwunye n'oge customization nke iPhone ikpe na onwe foto. Ka-eso ndị a steps-
Step1: Nanị tinye adreesị na mmanya nke nchọgharị gị na mgbe peeji egosi họrọ ngwaọrụ si n'ahụ gị nke na peeji nke. Ebe a bụ website njikọ: http://custom.case-mate.com/diy#start
Step2: Mgbe ahọpụta ngwaọrụ gị, a na peeji nke si n'okpuru dị iche iche na ọnụego ya na dị iche iche iPhone ikpe ga-abịa. E were ngwaọrụ gị bụ iPhone 5s. Ugbu a họrọ otu nke ga-egboro gị ego.
Step3: Ugbu a peeji a ga-enye gị ohere chepụta gị iPhone ikpe na foto gị. Họọrọ a foto site gị album na ịdọrọ na foto n'ime etiti nke gị iPhone ikpe.
Step4: Jiri mbugharị na & mbugharị si button si n'aka ekpe nke page. Na-agbanwe agbanwe ndabere agba, foto bugharia nhọrọ ndị dịnụ ebe a.
3.SHUTTERFLY: Shutter ofufe na-enye gị na ihe owuwu hazie gị na-achọsi ike iPhone ikpe na ọtụtụ foto nke gị.
Step1: Soro a njikọ: http://www.shutterfly.com/photo-gifts. Ị ga-ahụ niile edemede nke iPhone ikpe ke n'akụkụ aka ekpe nke na peeji nke. Họrọ ngwaọrụ gị nlereanya site na ya.
Step2: Were ya na ị chọrọ hazie gị iPhone bụrụ na, "na mahadum square iPhone ikpe" usoro. Pịa na na usoro. Mgbe ahụ ị ga-esi na peeji a. Ugbu a pịa na "hazie" button ịgbakwunye gị oyiyi na iPhone ikpe.
Step3: Ugbu a, ị ga-enweta a peeji dị ka n'okpuru otu na tinye foto gị, ị ga-pịa "Get photos" n'okpuru nke iPhone ikpe.
Step4: Ozugbo gị foto album emepe, i kwesịrị tinye gị họrọ oyiyi na igbe nke "Tinye Photos". Ugbu a, pịa "mere".
Step5: Ugbu a, ị dị nnọọ mkpa ka ịdọrọ otu otu nke gị họrọ photos, na obere okpokolo agba nke iPhone. Mgbe ahụ anya ga-adị ka nke a.
Step6: Dị ka nke a ụzọ gị iPhone ikpe ga-ele anya dị ka nke a.
4.TINYPRINTS: Na Obere Mbipụta Ị nwere ike hazie ọ bụla iPhone ikpe na foto gị. Dị ka nke a,
Step1: Soro a njikọ: http://www.tinyprints.com/shop/iphone-cases.htm. Ugbu a họọrọ ngwaọrụ gị na nri udi na họọrọ imewe wee pịa na ya.
Step2: Mgbe peeji na-egosi, mkpa ka ị pịa "hazie".
Step3: Na a na ogbo, gị mkpa iji tinye nkọwa wee pịa-anọgide na bọtịnụ.
Step4: Ị ga-ahụ 3 okpokolo agba na iPhone ikpe na, "Pịa ebe a iji tinye photos" e dere na ya.
Step5: Pịa otu n'ime ndị ịgbakwunye foto na gị iPhone ikpe na pịa oghe. Nke a bụ otú ị họrọ ọzọ abụọ photos kwa.
Step6: Ugbu a ịdọrọ photos otu otu na iPhone etiti ma wee pịa na mere bọtịnụ.
Step7: Na a na ogbo gị ngwaahịa ga-ele anya dị ka nke a.
5.VISTAPRINT: Iji jiri Vista Bipute hazie gị iPhone ikpe na onwe foto, ị chọrọ eso ndị a mfe nzọụkwụ.
Step1:-eso nke a pịa na "iPhone ikpe".
Step2: Ugbu a họrọ ekwentị gị ụdị. Na ọ bụ iPhone 4 / 4s.
Step3: Ugbu a họrọ otu iPhone ikpe ihe ị ga-achọ iji hazie na pịa "Ina malitere". Na ọ bụ na-echebe iPhone 4 / 4s ikpe.
Step4: Ugbu a họrọ ọ bụla imewe si na peeji a. Nwere ike ịbụ ọnụ ọgụgụ 10 na ọ dịghị click na ya.
Step5: Na n'elu peeji nke ị ga-ahụ, Insert- Image na Text igbe. Pịa oyiyi igbe na họọrọ abụọ nke foto gị ma pịa OK.
Step6: gị iPhone ikpe ga-ele anya dị ka nke a.
6.GETUNCOMMON: Iji jiri Get Ụkọ, na-eso ndị a dị mfe nzọụkwụ.
Step1: Pịa na a website njikọ: http://www.getuncommon.com/ na họrọ hazie nhọrọ si n'elu nke mmanya.
Step2: Ugbu a họrọ bulite gị onwe gị ihe oyiyi.
Step3: Ugbu a pịa họọrọ faịlụ na bulite gị onwe gị foto na ị chọrọ ịhụ gị iPhone ikpe.
Step4: Ugbu a banye maka free a website, na gị variable mail ID. Mgbe edebanye click on iPhone 6 (Plus) ma ọ bụ 5 / 5s ma ọ bụ 4 / 4s ikpe ka họrọ imewe.
Step5: Ugbu a họrọ a imewe n'ihi na gị iPhone ikpe. Na ọ bụ a ike gallery onye ahụ hazie na iPhone ikpe na foto gị.
7.SKINIT: Lee ndị ntụziaka nri n'okpuru.
Step1: Pịa na a njikọ: http://www.skinit.com wee họrọ ọ bụla nke imewe si, hazie a ikpe na gị onwe gị Photos, osise ma ọ bụ Design.
Step2: Pịa na oyiyi bulite gị ihe oyiyi na gị ahaziri iPhone ikpe.
Step3: Your ahaziri iPhone ga-ele anya dị ka nke a.
8.PICTURE IT NA kwaaji: Soro ntụziaka ndị a si n'okpuru.
Step1: a bụ website adreesị, pịa ya: http://create.pictureitoncanvas.com/customize/style na họrọ gị iPhone ngwaọrụ ihe zuru okè.
Step2: Ugbu a bulite foto gị, nke ị chọrọ ịhụ gị ahaziri ekwentị ikpe. Otú ọ dị, gị ahaziri iPhone ga-adị njikere a oge.
9.WALMART: Soro ụfọdụ mfe nzọụkwụ hazie iPhone ikpe na foto na Wal-Mart.
Step1: pịa a website: https://photos.walmart.com/walmart/storepage/storePageId=PhoneCases na họọrọ gị iPhone ngwaọrụ iPhone ikpe. Iji mee nke a dị mkpa ka ị na-emeghe a free akaụntụ na saịtị a.
Step2: Mgbe edebanye mkpa ka ị bulite a foto ịchọrọ ịgbakwunye ya na gị ahaziri iPhone ikpe.
Step3: Nke a bụ otú ị ga-esi ọhụrụ gị ahaziri iPhone bụrụ na Wal-Mart.
10.CAFÉ MGBASAOZI: Ikpeazụ, ma adịghị na ndepụta kafe pịa bụ kwa pụrụ ịdabere na isi iyi nke Hazie iPhone ikpe na onwe foto.
Step1: Pịa na a website okwu: http://www.cafepress.com/make/custom-iphone-cases na pịa gị iPhone ngwaọrụ hazie ya na gị foto.
Step2: Ugbu a bulite gị oyiyi.
Step3: Your ahaziri iPhone ikpe ga-ele anya dị ka nke a na pịa "m 'M okokụre."
Nke a top 10 ndepụta nke ahaziri iPhone ikpe na onwe, bụ 100% pụrụ ịdabere na ala. Ndepụta a ga-ebelata nsogbu gị n'oge iPhone ikpe customization na gị oke nke photos. Otú ọ dị, na-eche free na mma-mgbe ị na-aga na-eji ndị a ahaziri iPhone ikpe website.
> Resource> iPhone> 10 Ebe hazie Photo iPhone Ileba